​Safiirkii Maraykanka u joogay Somaliya oo is-casilay
MUQDISHO, Somaliya- Safiirkii dowladda Maraykanka u joogay waddanka Somaliya ayaa shaaciyay inuu shaqadii ka tagay sababo u gaar ah, sida ay xaqiijiyeen safaaradaha Somaliya ee Kenya iyo Washington.
Ambassador Schwartz oo ahaa safiirkii ugu horeeyay ee uu Mareykanka u magacaabo Somaliya muddo rubac qarni ah, shaqada ka tagay xilli uu jiro khilaaf u dhaxeeya DFS iyo maamul goboleedyada kaasoo salka u haya arrimo siyaasadeed.
Lama oga sababta rasmiga ah uu shaqada uga tagay marka laga reebo hadalkiisa ah inuu xafiiska u baneeyay arrimo u gaar ah.
Ninkan oo shaqada loo dhaariyay bishii June sanadki 2016-kii, ayaa xafiiskiisu dowladda Somaliya ka caawinayay arrimaha amniga, dhismaha ciidamada Somaliya iyo hirgalinta nidaamka Federaalka.
Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa u xaqiijiyay VOA-da is casilaadda safiirka, isagoo sheegay in iscasilaadiisa la soo gaarsiiyay laba maalmood ka hor.
Majirto wax war ah oo ilaa hadda kasoo baxay dowladda Somaliya, kaasoo ku aadan sida ay u aragto is-casilaada Schwartz.
Arrintan ayaa timid xilli Maraykanu uu si toos ah ciidamadiisu uga howlgalaan dalka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al Shabaab, waxay diyaaraha Washington duqaymo ka gaystaan Koonfurta dalka.
Lama oga waxa arrintan ka badali doonto calaaqaadka labada waddan oo muddooyinkii dambe soo hagaagayay.
​Hakad laga galiyay suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho
Soomaliya 05.10.2017. 20:06
MUQDISHO, Somaliya- Suuqa Labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee caasumadda Somaliya dadkuna aad uga dukaamaystaan ayaa maanta hakad la galiyay, sida ay xaqiijiyeen wararka laga helay dadka deegaanka iyo saraakiisha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
​Shariif Xasan oo Kismayo ka dagay [Sawirro]
Soomaliya 06.10.2017. 16:29
GALKACYO: Camey iyo Carabay oo goob joog ka ahaa Xaflad baabuur lagu wareejinayay
Puntland 09.08.2017. 21:46
​RW Khayre “Puntland waxay tusaale fiican u tahay Maamullada
Puntland 01.08.2017. 20:57
​Sarriflayaasha iyo maamulka Galkacyo oo hishiiyay
Puntland 22.07.2017. 16:53